Amina Weris oo xukunka dalka dhexda u xidhatay by Abdi Mustafe‏
Amina Weris oo xukunka dalka dhexda u xidhatay by Abdi Mustafe‏ 0 July 16, 2015 in Articles by somalilandlive Staff Visits: 714
Amina Weris oo xukunka dalka dhexda u xidhatay by Abdi Mustafe‏ Warar
aan kutri-kuteen ahayn oo lagu kalsoonyay oo dad madaxtooyadaka ag dhawi soo tebiyeen ayaa sheegaya in xaalada caafimaad ee madaxweynuhu ay
dhawaan hoos u dhacday. Marwada madaxweynaha ayaa intii bishii Ramadaan
lagu jiray habeen walba shirarka madaxtooyada ka qabsooma gudoominaysay. Halkii uu Silaanyo dadka cusbitaalada jiifa ama danyarta iyo agoomaha bisha Ramadaan soo booqan lahaa oo uu ufur siin lahaa ayaa waxa dhexda marada ku xidhatay Amina Weris oo Hargiesa iyo gabiley u kala gooshaysay. Warar kaa lagu kalsoonyay waxay carabka ku adkeeyeen in
ay adkaan doonto in mar danbe meelaha fagaara yaasha lagu arko madaxweynaha iyaga oo ka webinayay caafimaad kiisaoy sheegeen in odeygii jilcay oo aannu tahli doonin in uu socodka mar danbe buuf taamiyo. Sidaa darteed ayaa madaxtooyadii madax iyo mijo aanay u kala lahayn bishii u danbaysay oo Silaanyo laga la'yay in uu soo sara fadhiisto oo gudoomiyo shirarka habeenkii ka dhaca madax tooyada. Isku so wada duub oo waxa mucjiso ah oo wax lala yaaba ah inta Silaanyo dawooyin iyo irbado la siiyo in dadka uugu dhawi yidhaahdaan intan baa kugu filan isagaa dhakhtar kiisa London hore u sheegay in uu qaliin u baahanyay oo marwadu u diiday. Waxa lala yaabanyay Marwada iyo kooxda ku
xeeran madaxweynaha ma waxay u haystaan in uu da' yaraanayo oo waxay sugayaan in dub loo abuuro. Waa arin laga yax-yaxo in loo diidanyay dalkii uu dawo iyo xanaano ka heli lahaa ee ku nasan lahaa oo Hostage ahaan loogu heysto madaxtooyada dhexdeda. Waa wada daawateen markii Dhuxul iyo Xirsi madaarka Hagiesa ku bahdaleen madaxweynaha ee isna hadal ka soo bixi waayay ee la yidha yala ina socod sii cidina sua'llo ku weydiin meyso e. Sidii oo kale ayaa madaxtooyada dhexdeeda loogu heystaa.Hadalku iskuma jiro madaxweynaha waxa ku xeeran dad aan u naxayn oo aan u tudhayn oo dantooda hanti boobka ah uun ku fushanaya oo kolba dhan u walqinaya. ilahow naga nabad geli dad aan naxayn.
Name: Email: Website: Security Code: Comment: Social Media Related Items Halkan Ka Daawo Xuukuumadda Cimrigeedii Dhammaaday Ee KULMIYE Oo Hanjabaad Culus U Dirtay Madax-dhaqameedka Dalka